Koraaya Business a
Ready in ay ku biiraan boqolaal kun oo ganacsiga yar yar kuwaas oo aqoon fiican, dheeraad ah oo loo diyaariyey iyo taabtay galay network xooggan khayraadka?
Buuxi an-line on Arjiga Adeegyada oo maanta bilaw falanqaynta dhaqaale xor ah.
Consulting Professional Free
SBDC wuxuu bixiyaa diyaariyeen ah ee adeegyada ganacsi la aasaasay, lugu daro:
maamulka socodka Cash
Waxaad ka heli talooyin ku habboon oo dhab ah meelaha sida:
Maxaad ma aan haysan wax lacag ah haddii iibka waa xoog?
Waxaan u baahanahay in ay si fiican u fahmaan dhaqaalaha my
Sidee baan ku heli karaa helitaanka hantida dheeraad ah oo ku shaqada?
Ma jiraan siyaabo kale in bangiyada?
Waxaan u dhan ma samayn karo, — sidee ayaan u heli dadka xaq inaad i caawiso?
Sidee baan u ilaalin hantida aan?
Sidee baan u cusboonaysiiyo aan ganacsi?
Sidee baan u suuq kartaa wax ku ool ah?
Waxaan u baahanahay qorshe isku xigta a for my ganacsi
Iyadoo aynaan wax ka maamulaan barnaamijyada amaah ama deeq, waxaan kaa caawin doona inaad la aqoonsado iyo qiimeeyo fursadaha maal-, qiimeyso xaq u yeelashada, iyo diyaarinaysaa caddeymo in deyn u baahan. Dhab ahaan, deyn badan ka doonayaan kuwa deynsanaya in ay la SBDC shaqeeyaan inta aadan soo gudbin codsiga amaah ah.
Siminaarro iyo tababaro si aad u kordhiso aqoonta ganacsiga:
JADWALKA KORORSIGA & DIIWAANGELINTA
Iyada oo adeegyada LegalCORPS qareenka iskaa wax u qabso, our Clinics Legal for Ganacsatada bixiyaan lacag la'aan ah, talo kooban (ilaa 30 daqiiqo) in non-litigation business law matters to owners of small businesses and low-income innovators in Minnesota — at a critical time when legal counsel is typically not affordable. Ballan oo kaliya. Wac SBDC ee 507-389-8875.